Abalingiswa 'Izinto Ezingaziwa' Bajoyina 'Abafile Ngemini' ku-Trailer - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Abalingiswa 'Bezinye Izinto' Bajoyina 'Abafile Ngemini' ku-Trailer
Abalingiswa 'Bezinye Izinto' Bajoyina 'Abafile Ngemini' ku-Trailer
Kungenzeka ukuthi sisafa kancane kancane ngenkathi silinde ukufika kwe- Isihambi Izinto isizini 4 kuNetflix. Kepha, kubonakala sengathi okwamanje i-Netflix's Isihambi Izinto ingeza okuqukethwe okuningi emhlabeni womdlalo odumile, Kufile ngo-Daylight.
I-trailer yakamuva evela ku- Kufile ngo-Daylight enesihloko esithi "Moment of Truth Collection" ifaka abalingiswa abambalwa kusuka Isihambi Izinto ukuwelela ezweni le Kufile ngo-Daylight futhi kubukeka kuhle impela kuze kube manje. Isihambi Izinto ijoyina amanye ama-crossovers esikhathi esidlule anjenge Scream, Halloween futhi I-Nightmare ku-Elm Street. Kufile ngo-Daylight I-DLC iletha njalo umzingeli omusha onezimfanelo ezintsha nezinto azisebenzisayo ukuzingela inyamazane yakhe entsha.
Okwangaphambilini nokuqala Isihambi Izinto I-DLC ifake uSteve Harrington noNancy kanye ne-demogorgon. Lokhu kuzoshintsha isimanga sikaHarrington sibe nguJonathan Byers.
Amazwibela wokwehlukaniswa kwe- new Izinto Ezingaziwa X Zifile Ngemini okuqukethwe kuhamba kanjena:
Okuqukethwe okusha kufaka phakathi i-Legendary Set yokuqala etholakalayo yomlingiswa we-Stranger Things ngokuguqula uSteve Harrington (ngokubukeka kuphela) abe ngomunye wabalingisi abaphambili balolu chungechunge kuJonathan Byers. Okunye okuqukethwe i-Moment of Truth Collection, ingubo exube kakhulu yokuhlanganisa nomdlalo kaNancy Wheeler ebizwa nge-Impulsive Activist Outfit.
I-Nancy's Impulsive Activist Outfit isiyatholakala manje ngama-1,080 Auric Cell esitolo se-in-game, kuyilapho i-Jonathan Byers Legendary Set kaSteve Harrington ingathengwa ngama-1,485 Auric Cells. Ngokusobala, kuzodingeka ube ne-Stranger Things DLC ukuze uzisebenzise emdlalweni.
I-trailer yembula bobabili uJonathan Byers noNancy Wheeler kanye nezingubo zikaNancy.
Ngizijabulela kakhulu zonke lezi crossovers. Ngicabanga ukuthi enye yazo engcono kakhulu yi- Halloween crossover. Lowo wafika ephelele noMichael Myers stalker, uLaurie Strode, ibanga langemuva laseHaddonefield nezinye izinzuzo ezipholile ngempela ze-stalker.
Le crossover ethokozisayo futhi ethakazelisa nakakhulu ukuthi lolu shintsho olusuka eSteve Harrington luye eBers lusabhalwe ohlwini njengeHarrington lapho lukhombisa ngokusobala iBers.
Ngabe nina bantu nicabangani nge- Isihambi Izinto futhi Kufile ngo-Daylight crossover? Ngabe usadlala Kushone uDayllight? Sazise esigabeni sokuphawula.
UChristopher Lee uneqoqo elikhulu le-disc le-9 disc eliphume ngasekupheleni kwenyanga! Funda kabanzi bese u-oda ngaphambili lapha.
I-Nightmare ku-Elm Streetngifile eminiDLCHalloweenNetflixPlayStationScreamIsihambi IzintoXbox
I-'Hall to the Deadites 'Idokhumentari igwinya umphefumulo wakho kuleli hlobo
Dlulisa amehlo kuma-Cateories Khetha Category I-Amazon (i-movie) (7) I-Amazon (uchungechunge) (9) I-AppleTV + (4) Imisebe ye-Blu (5) Amahlaya Ahlekisayo (46) Amahlaya (13) I-Facebook (uchungechunge) (1) Izinganekwane (37) Kutholakale amavidyo (27) I-Gore (24) I-HBO (ama-movie) (5) I-HBO (uchungechunge) (7) Izincwadi zeHorror (51) Izindaba zeHorror Entertainment (10,602) Ama-movie asabisayo (215) Uchungechunge lwe-Horror (60) Ama-Horror Subgenres (9) IHulu (uchungechunge) (4) Izingxoxo (i-movie) (34) Izingxoxo (uchungechunge) (2) I-LGBTQ Horror (35) Uhlu (ama-movie) (37) Uhlu (uchungechunge) (2) Imakethe (19) I-Monster Horror (9) Ukubuyekezwa kwe-Movie (46) Ama-movie (13) Umculo (35) INetflix (i-movie) (21) INetflix (uchungechunge) (24) Okungeyona inganekwane (3) I-Paranormal (75) I-Psychological Horror (thrillers) (52) Ukubuyekezwa kochungechunge (8) Ukuqhaqhazela (i-movie) (43) Ukuqhaqhazela (uchungechunge) (15) I-Slasher (4) Okungajwayelekile futhi Okungajwayelekile (35) Ama-Movie wokusakaza (62) Uchungechunge Lokusakaza (23) Amathoyizi (2) I-trailer (i-movie) (173) I-trailer (uchungechunge) (36) Ubugebengu Bangempela (42) Imidlalo Yevidiyo (172) I-YouTube (i-movie) (3) I-YouTube (uchungechunge) (11)